Ny minisiteran'ny fizahantany sy ny sidina ao Bahamas dia taratry ny taona sarotra sy andro mamiratra kokoa
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Ny minisiteran'ny fizahantany sy ny sidina ao Bahamas dia taratry ny taona sarotra sy andro mamiratra kokoa
Rehefa nifarana ny taona 2020, ny Minisiteran'ny Fizahan-tany sy ny fiaramanidina Bahamas indray dia taratry ny taona manan-tantara sy feno fanamby. Taorian'ny fankalazana mpitsidika fito tapitrisa namaky firaketana an-tsoratra tamin'ny taona 2019, dia niomana ny hitombo hatrany sy ny fanambinana atosiky ny fizahan-tany ny firenena, noho ny fiakaran'ny fiaramanidina marobe avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro, tsy lazaina intsony ny fanohanan'ny haino aman-jery iraisam-pirenena, toy ny The New York Times, Frommer's ary The Globe and Mail, ankoatry ny maro hafa, izay nantsoina hoe The Bahamas ho toy ny toerana tsy maintsy tsidihina amin'ny 2020.
Ny areti-mandringana COVID-19 dia krizy tsy nampoizina izay nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany manerantany, izay nahatsapa ny vokany tany The Bahamas. Ny fizahan-tany no ivon'ny firenena ary, noho izany, raharahan'ny tsirairay. Tahaka ny hita taorian'ny rivodoza Dorian, tsy vahiny amin'ny fanaovana tantara amin'ny toe-javatra sarotra ny Bahamiansana. Ankehitriny, ny vahoaka Bahamianina dia niara-nivory ho fianakaviana nosy, niray hery sy nahavita nanampy tamin'ny fanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19 ary nanome antoka fa hiroborobo indray ny orinasa tsy ho ela. Misy fanantenana be dia be satria ny nosy dia hahita fiverenana hanoratra ny isan'ny mpitsidika manaparitaka, raha vao azo antoka ny fivezivezena malalaka indray. Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta dia manao izay rehetra azo atao mba hamerenan'ny Bahamianina asa.
"Amin'ny alalàn'ny fanohanan'ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany ao Bahamas, ny birao fampiroboroboana, ny maso ivoho, ny haino aman-jery ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany hafa no nahafahan'ny firenena nametraka ny torolàlana sy ny fepetra fisorohana mba hanakanana ny fielezan'ny COVID- 19 ", hoy ny minisitry ny fizahan-tany sy sidina Bahamas, Dionisio D'Aguilar. "Ny kaonty vaovao sy voafintinay momba ny fidirana sy ny dia an-nosy, namboarina taorian'ny fanaraha-maso tsara, famakafakana mavitrika ary valiny haingana avy amin'ny orinasam-panjakana rehetra, mampihatra ny fepetra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny daholobe ary mamela ny mpandeha hankafy malalaka kokoa ny traikefa vakansy."
Ny protocole farany farany dia noraisin'ireo mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka fizahan-tany ary mifanaraka amin'ny vaovao momba ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fiakaran'ny vidin'ny airlift. Marihina, telo amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra any Nassau - Grand Hyatt Baha Mar, Atlantis Paradise Island ary British Colonial Hilton - dia misokatra amin'ny tapaky ny volana desambra, miaraka amin'ny lisitr'ireo trano fandraisam-bahiny fanampiny miverina amin'ny volana Janoary sy Febroary. Manomboka amin'ny tapaky ny volana desambra ihany koa, ireo mpitatitra fiaramanidina amerikana ambony anisan'izany ny JetBlue, American Airlines, United Airlines ary Delta dia manampy sidina amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo.
"Adidintsika ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy sidina ao Bahamas ny mampiroborobo ny fizahan-tany any amin'ny firenentsika tsara tarehy, ary na dia nitondra sakana tsy mbola nisy toy izany aza ny taona 2020, dia tsy miova mihitsy ny fanantenana sy ny fanoloran-tena ho an'io iraka io," hoy i Joy Jibrilu, Tale Jeneralin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fiaramanidina Bahamas. "Rehefa miandrandra ny 2021 isika, dia hanohy hahita fomba vaovao sy tsy manam-paharoa hampiroborobo ny tolotra nosintsika amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa sy fandraisana andraikitra manitatra izay hampiverina mpitsidika betsaka kokoa antsika haingana araka izay tratra."
Ny Ministeran'ny Fizahan-tany sy ny fiaramanidina Bahamas dia manohy ny fampielezan-kevitra mahery vaika amin'ny varotra sy ny varotra mba hahatratrarana tsena lehibe any Etazonia ary hampiroborobo ny fisokafan'ny Bahamas ho an'ny orinasa, raha mizara ny fepetra takiana amin'ny fidirana sy ny protokolon'ny dia ilaina hitandroana ny filaminana eo amin'ny firenena. Ny paikady fampiroboroboana dia:
• Drafitra haino aman-jery kendrena - nanomboka ny fiandohan'ny volana martsa dia nisy drafitra haino aman-jery lasibatra ara-jeografika efa natao ary ny hitazomana ny Bahamas ho dinihina amin'ireo mpandeha, indrindra ireo mipetraka amin'ny tsena lehibe toa an'i South Florida, Houston ary New York, ary mitaona ireo efa nizotra ny toerana haleha taloha mba hiverina.
• Fanamafisana ny haino aman-jery matanjaka - Ny serasera tsy tapaka sy miely amin'ny fizahan-tany, ny fomba fiainana ary ny fampahalalam-baovao dia nampahafantatra ny mpanjifa fa misokatra ho an'ny mpitsidika ny Bahamas, raha mizara fampahalalana marina momba ny fepetra takiana amin'ny fidirana sy ny protokolon'ny nosy izay hisy fiatraikany amin'ny mpitsidika. Ny famoahana gazety izay mandrakotra ny tsena lehibe mitsangana toy ny fiaramanidina manokana sy ny sambo dia natao ihany koa hanomezana toky ny mpihaino azy ireo momba ny fepetra farany takiana amin'ny fitsidihana an'i Bahamas.
Loka vao haingana - Ny Bahamas dia nanala ny fizarana loka tamin'ity taona ity, nahazo loka ambony maro. Nomena ny loka Bahamas Innovative Destination of the Year ny loka Caribbean Travel; hotely Bahamianina efatra ahitana an'i Kamalame Cay, Rosewood Baha Mar, Grand Hyatt Baha Mar ary SLS Baha Mar no eken'ny Condé Nast Traveler's Choice Awards, ary The Islands of The Bahamas dia nekena tamin'ity taona ity Loka momba ny mpamaky Scuba Diving Magazine, miaraka amin'ny fametrahana toerana manasongadina ireo sorona antsitrika be dia be manerana ny nosy sy cays 700. Anisan'ireo loka ireo ny Bahamas nahazo toerana ambony tamin'ny sokajy maro fa ny laharana voalohany manamarika ny sokajy biby lehibe. Gazety any Karaiba Ny fankalazana ny fizahan-tany any Karaiba dia manaiky an'i Bahamas amin'ny sokajy telo - In Gazety any Karaiba 7th Nahazo mari-pankasitrahana isan-taona ny Caribbean Travel Awards, The Bahamas Toerana manavao ny taona noho ny fahalalahany mitohy mandritra ny areti-mandringana ary mametraka fenitra ho an'ny fampiharana fidirana. Ankoatr'izay, nomena anarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Nassau Lynden Pindling Seranam-piaramanidina Karaiba amin'ny taona ary Graycliff dia nekena ho Trano fisakafoanana any Karaiba taona.
• Fandaharana maharitra maharitra Bahamas - Ny nosy Bahamas dia nanambara ny programa Bahamas Extended Access Travel Stay (BEATS) vaovao, fahazoan-dàlana maharitra maharitra herintaona natao hamelana ireo matihanina sy mpianatra hanangona ny solosainany sy ny akanjony milomano rehefa mandroso amin'ny fidobohana ampongabendaniny manokana, lavitra avy any The Bahamas.
• Tranonkala nohavaozina - Tranonkala vaovao Bahamas.com nohavaozina izay miomana ny handefa azy, manolotra interface tsara ho an'ny mpampiasa kokoa ary ao anatin'izany ny fitaovana fanampiny hampiroboroboana ireo hetahetam-pihetseham-po ho an'ireo mety ho mpandeha. Ny fizarana vaovao dia hanasongadinana ny tantaram-pitiavana, ny hetsika, ny fifaliana ary ny fifantohana betsaka amin'ny fomba ahatongavana any amin'ireo Out Islands.
• Fivarotana virtoaly sy fanolorana tsena mitsangana - satria tsy azo natao manokana ny fampiroboroboana ny tsena sy ny tsena amin'ity taona ity, dia niasa haingana ny ekipan'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany mba hamorona tolotra virtoaly izay hitazomana ny vondron'olona mpivarotra dia. Ity asa ity dia nahitana ny famolavolana sehatra virtoaly vaovao ho an'ny webinar sy fampiratiana varotra. Ny programa manokana an'ny Bahamas dia namboarina indray hanakatonana ny elanelana misy eo amin'ny fanabeazana, ny aingam-panahy ary ny varotra. Miaraka amin'ity haitao vaovao ity, ny Minisiteran'ny Fizahan-tany dia nanao hetsika virtoaly erak'izao tontolo izao izay nampivondrona ireo mpamatsy sy mpiara-miombon'antoka rehetra hizara sy hiady hevitra momba ny protokolon'ny COVID-19 sy ny vaovao farany. Hetsika virtoaly fanampiny tafiditra ao: ny trano fialamboly Bahamas virtoaly voalohany ho an'ireo mpandraharaha antsitrika mandritra ny DEMA, fampisehoana mpamatsy antsitrika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao; webinar ho an'ny mpanamory fiaramanidina manokana izay manohana ny hetsika mialoha ny fahazoan-dàlana alohan'ny hetsika South Florida sy Facebook Live izay manasongadina ireo manam-pahaizana momba ny fahandro, mpahay mixology sy mpandraharaha mpanao asa tanana eo an-toerana. Farany, niasa mafy ny ekipa hanamafy ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny rivotra amin'ny ezaka hanamorana ny fiverenan'ireo sidina iraisam-pirenena. Ny Minisitera koa dia nanangana programa ambasadaoro misitrika sy misamboara izay misy ireo mpandray anjara lehibe amin'ny indostria izay hanohana sy hanampy anay amin'ny fampiroboroboana ny toerana haleha. Ny fisongadinana ho an'ny Romance 2020 dia ahitana ny fandraisana anjara amin'ny fampisehoana TravAlliance Fall fampisehoana ho an'ny Weddings ho an'ny Destination sy ny Honeymoon Segment ary ny famerenana amin'ny fomba ofisialy ny magazine The Bahamas 'Romance Magazine izay havoaka mandritra ny Forum Romance an'ny Ministera amin'ny volana martsa 2021.
• Tantara an-tantara - Fanentanana iray momba ny varotra votoaty nandresy tamin'ny loka Bahamians ao an-toerana miresaka ny kolontsain'ny firenena, ny nahandro, ny zavakanto ary ireo tolotra hafa tsy manam-paharoa izay mampiavaka an'i Bahamas amin'ireo fialantsasatry ny nosy hafa.
• Fandaharana bilaogera - Ho fanampin'ny programa fitantarana tantara tena izy, ny Minisiteran'ny Fizahan-tany koa dia namolavola programa fitorahana bilaogy matanjaka ao amin'ny Bahamas.com izay nizara ny tantaran'izy ireo momba ny dia sy kolontsaina tany Bahamas tamin'ny fanentanana sy fampifandraisana amin'ny ho avy. mpitsidika.
• Tifitra votoaty ao an-toerana - Ho ezaka hitazomana ny famoahana atiny famoronana vaovao ao amin'ny fantsona sosialy Visit The Bahamas, dia niantso ny ekipa talenta sy ekipa fakantsary ao an-toerana ny Minisitra mba hitifitra atiny mba hisarihana ireo mpampiasa haniry hahafantatra misimisy kokoa momba ilay toerana haleha.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700, ary toera-nosy 16 tsy manam-paharoa, ny Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, izay manome sidina mora miala lavitra izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo ary kilasy an'arivony maro amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ireo nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.
Nanambara ny fikorontanan'ny toetrandro ny fikambanan'ny fizahan-tany eropeana
Ny nosy Bahamas dia nibolisatra ny fizarana mari-pankasitrahana momba ny dia tamin'ny taona 2020
48 minitra lasa izay